संसार कै सबैभन्दा १० धनी फुटबल खेलाडी ? कति छ सम्पत्ति ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
संसार कै सबैभन्दा १० धनी फुटबल खेलाडी ? कति छ सम्पत्ति ?
सोमबार, बैशाख २४, २०७५ १६:२९ मा प्रकाशित !
एजेन्सी । फुटबल खेलेर जीवन निर्वाहमात्रै होइन करोडौं पैसा कमाउन सकिने विश्वका धेरै खेलाडी उदाहरण बन्न सक्छन् । उनी फुटबलमै सारा समय बिताउँछन् । अधिकांश समय फुटबल खेल्ने गर्छन् । आफ्नो पेसाप्रतिको लगाव र उनीहरुलाई फुटबलप्रति आकर्षित र दक्ष बनाउन सम्बन्धित् देश र क्लबले काम गर्छन् ।
अहिले संसारमै चर्चित रहेका खेलाडीको सम्पत्ति कति छ ? आम फुटबल प्रेमीको चासोको विषय बन्न सक्छ । पढौं संसारकै १० धनी फुटबल खेलाडीको सम्पत्ति विवरण
१. क्रिष्टियानो रोनाल्डो
रियल मड्रिडका स्टार क्रिष्टियानो रोनाल्डोसँग २३ करोड डलर सम्पत्ति छ ।
२००३ मा म्यानचेस्टर युनाइटेसँग अनुबन्ध हुँदै २००८ मा रियल मड्रिड आएका रोनाल्डोले पोर्चुगलको राष्ट्रिय टिमबाट १४९ खेलमा ८१ गोल गरेका छन् । उनले रियल मड्रिडबाट ३ पटक र म्यान यु बाट १ गरी चार पटक च्याम्पियन्स लिग, २ पटक ला लिगा, २ पटक कोपा डेल रे लगायतका उपाधि जितेका छन् । उनले पाँच पटक बालोन डि’ओर समेत जितेका छन् ।
२. मेस्सी (२१८ मिलियन)
बार्सिलोनाका स्टार लियोनल मेस्सीसँग २१ करोड ८० लाख सम्पत्ति छ । उनले अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोलीमा २००५ मा डेब्यू गरेका थिए । उनले बार्सिलोनबाट अहिलेसम्म ९ ला लिगा, चार च्याम्यिन्स लिग, चार कोपा डेल रेको उपाधि चुमेका छन् । यस्तै उनले ५ पटक बालोन डि’ओर जितेका छन् । उनले राष्ट्रिय टोलीबाट १२३ खेल खेल्दै ६१ गोल गरेका छन् ।
३. नेयमार (१४८ मिलियन)
नेयमारले ब्राजिलको सान्टोस क्लबबाट १७ बर्षको उमेरमा करियर सुरु गरेका हुन् । बार्सिलोना, पेरिस सेन्ट जर्मेन पिएसजीमा पनि खेलेका नेयमारसँग १४ करोड ८० लाख सम्पत्ति छ ।
४. जाल्टन इब्राहिमोविच (११४ मिलियन)
स्विडेनका लिजेण्ड जाल्टन हाल अमेरिकन क्लब एलए ग्यालेक्सिमा आवद्ध छन् । युभेन्टस, बार्सिलोना, मिलान, पेरिस सेन्ट जर्मेन, म्यानचेस्टर युनाइटेड लगायतका विश्वचर्चित क्लबबाट व्यवसायिक फुटबल खेलेका उनीसँग ११ करोड ४० लाख डलर सम्पत्ति छ ।
रुनी अहिले एभर्टनबाट व्यवसायिक फुटबल खेल्छन् । गत सिजनसम्म म्यानचेस्टर युनाइटेडमा रहेका उनको अहिले ११ करोड २० लाख सम्पत्ति छ ।
८ बर्षको उमेरमा खेल करियर थालेका ब्राजिलका ३४ बर्षिय काकाको १० करोड ५० लाख डलर सम्पत्ति छ । उनले रियल मड्रिड, मिलान, साओ पाओलो एफसीबाट खेलेका उनी अहिले विश्व खाद्य कार्यक्रमका सद्भावना दूत समेत हुन् ।
७. शमुएल इटो
टर्कीको क्लब अन्टाल्यासार्पबाट खेल्ने क्यामरुनका शमुएल इटासँग अहिले ९ करोड ५० लाख सम्पत्ति छ । उनले राष्ट्रिय टोलीमा २००० मा डेब्यू गरेर र ११८ क्यापमा ५६ गोल गरे ।
राउलले स्पेनिस क्लब एथ्लेटिको मड्रिडको एकाडेमीबाट फुटबल करियर थालेका हुन् । १६ बर्ष रियलमा बसेका यी फर्वाडले ७४१ खेलमा बनाएको सर्बाधिक गोल कर्ताको रेकर्ड पछि क्रिष्टियानो रोनाल्डोले तोडेका थिए । उनले स्पेनको राष्ट्रिय टोलीबाट १०२ खेल खेल्दै ४४ गोल गरेका थिए । उनीसँग हाल ९ करोड ३० लाख डलर सम्पत्ति छ ।
ब्राजिलका लिजेन्ड रोनाडिन्होकोे ९ करोड पाँच लाख डलर सम्पत्ति छ । अहिले स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका सद्भावना दूत छन् । उनले पेरिस सेन्ट जर्मेन, बार्सिलोना, मिलान लगायतका विश्व चर्चित क्लबबाट व्यवसायिक फुटबल खेले । उनले ब्राजिलको राष्ट्रिय टोलीबाट ९७ क्याप खेल्दै ३३ गोल गरेका छन् । स्किलका बादशाहकारुपमा चिनिने उनी आफ्नो पिढीका फुटबर मध्येका उत्कृष्ट हुन् ।
१०. फ्रान्क लाम्पार्ड
फ्रान्क लाम्पार्डको सम्पत्ति ८ करोड ७० लाख डलर रहेको छ । अमेरिकी क्लब न्यूयोर्क सिटीबाट अमेरिकन लिग खेल्ने ३८ वर्षीय लाम्पार्डले वेष्ट ह्याम युनाइटेडबाट करियर सुरु गरेका हुन् । उनी उनले आफ्नो करिअरमा २११ गोल गरेका छन् । उनले इंग्लल्याण्डबाट १०६ क्याम खेलेका छन् ।
PREVIOUS POST Previous post: बिहान वा बेलुका नुहाउदा राम्रो ?जानी राखौं
NEXT POST Next post: आचार्य श्रीनिवासले आफैलाई गोली हान्न लगाउनुमा यस्तो रहेछ कारण
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते सोमबार, बैशाख २४, २०७५ १६:२९
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस सोमबार, बैशाख २४, २०७५ १६:२९
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण सोमबार, बैशाख २४, २०७५ १६:२९
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी सोमबार, बैशाख २४, २०७५ १६:२९
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? सोमबार, बैशाख २४, २०७५ १६:२९